Uyini umehluko phakathi kwamagilavu ​​e-nitrile namagilavu ​​e-latex?
Umehluko phakathi kwamagilavu ​​e-nitrile namagilavu ​​e-latex ulele ikakhulu ezintweni ezahlukahlukene nasezakhiweni ezahlukahlukene zokuvikela zemikhiqizo. Endaweni ekhethekile, opharetha baye balimala ngokugqoka ngokungafanele izinto zokuzivikela noma ukuvikelwa okunganele, kanti ezinye ze-t ...
Ngoba amagilavu ​​alahlwayo angahlukaniswa ngamagilavu ​​enjoloba we-nitrile, amagilavu ​​e-PVC kanye namagilavu ​​wemvelo we-latex ngokwalokho okusetshenziswayo. Manje uyini umehluko phakathi kwabo? A, okokusebenza kuhlukile 1. amagilavu ​​enitrile enjoloba: okubalulekile yi-NBR uhlobo lwenjoloba ye-butadiene, izingxenye eziyinhloko ze ...
I-Novel coronavirus isakazeka ngokuya yanda emhlabeni jikelele, kube nokwanda kwesidingo semishini yokuvikela, ikakhulukazi amaski okuvikela kanye namagilavu ​​wemvelo we-latex. Njengenye yezindlela zokuzivikela ezibalulekile, amagilavu ​​wemvelo we-latex wezokwelapha anganikeza ukuphepha okuhle kakhulu ne-isolati ...
Ayini amagilavu ​​enitrile? Uyini umehluko phakathi kwamagilavu ​​e-nitrile nenjoloba?
Amagilavu ​​e-nitrile, kwesinye isikhathi abizwa ngamagilavu ​​e-nitrile, ukuphepha nokuvikela amagilavu ​​okwenziwe ngezinto zenjoloba ye-nitrile, anokumelana okuhle namakhemikhali aphilayo, i-physics enhle, izakhiwo ezilwa ne-static, isitayela esinethezekile, futhi asetshenziswa kakhulu ezimbonini zehardware, ukuhlolwa kwezokwelapha, ukudla ...